China Glyphosate orinasa mpamokatra sy mpamatsy | Lemandou
Votoatiny (g / L) ≥480
Bika Aman 'endrika Rano mangarahara volamena
Sarobidy PH 4.0-7.0
Tsy voavaha anaty hidrômaida sodium natokana ho 1m / L (%)
Fahaverezan'ny maina (%)
Famonoana poizina mahafaty izay, raha tsy ampiasaina amin'ny fomba ratsy, dia mitera-doza amin'ny fambolena
Famonoana herisetra aorian'ny tsimok'aretina tsy voafantina miaraka amin'ny fiainana sisa tavela izy ary ampiasaina hifehezana ireo ahidratsy lalim-paka maharitra
Manimba ny olombelona ve ny glyphosate?
"Ny tombana amin'ny risika ho an'ny glyphosate dia ambany lavitra noho ny ahiahy", hoy ny mpitondra tenin'ny EPA, Dale Kemery. Ny EPA dia manasokajy ny glyphosate ho singa simika ao amin'ny Group E, izay midika fa misy porofo matanjaka fa tsy miteraka homamiadana amin'ny olombelona izany. ... Nanatsoaka hevitra ny EPA fa tsy mampidi-doza ny fahasalamam-bahoaka na ny tontolo iainana.
1. Glyphosate dia mpamono ahitra biocidal. Aza atao maloto ny zava-maniry rehefa apetrakao hisorohana ny fitopotoxisialy.
2. Ho an'ny ahidratsy maharitra maharitra, toy ny Imperata cylindrica, cyperus rotundus, sns., Apetaho indray mandeha isam-bolana ny fanafody aorian'ny fampiharana voalohany hahatratrarana ny vokatra fanaraha-maso tadiavina.
4. Ny vokatry ny fanafody dia tsara amin'ny andro main'ny masoandro sy ny mari-pana avo, ary tokony hofafazana izany raha toa ka avy ny orana ao anatin'ny 4-6 ora aorian'ny famafazana.
5. Asidra ny glyphosate, koa tokony hampiasaina arak'izay azo atao ny kaontenera plastika rehefa mitahiry sy mampiasa.
6. Tokony hodiovina miverimberina ireo fitaovana famafazana.
7. Rehefa simba ilay fonosana dia mety hiverina amin'ny hamandoana sy ny aglomerate amin'ny hamandoana be izy io, ary mety hipoaka koa ny kristaly rehefa voatahiry amin'ny mari-pana ambany. Ny kaontenera dia tokony hohozongozonina tanteraka handravana ireo kristaly mba hiantohana ny fahombiazany.
8. Izy io dia famonoana herisetra biocidal karazana rafitra. Rehefa famafazana dia tandremo mba tsy hanintona ny zavona amin'ny zavamaniry tsy kendrena ary hiteraka fitotoam-panahy.
9. Mora sarotra amin'ny calcium, magnesium, aluminium plastika, rano malefaka madio no tokony hampiasaina rehefa manalefaka pestisides, ary ny rano maloto na ny rano maloto dia hampihena ny fahombiazany.
10. Aza moka, manety na manodina ny tany ao anatin'ny 3 andro aorian'ny fampiharana.
Manaraka: Zezika voajanahary voajanahary